Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Qorshooyinka Bullish-ka ee Ryanair Xagaaga 2022 Miyey Bixin Doontaa Dakhliga?
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Irland News Breaking News • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Duulimaadka ugu qiimaha jaban qaaradda yurub wuxuu hiigsanayaa xagaaga 2022 inay tahay waqtigiisu inuu ifto, diyaargarowguna waa socdaa.
Ryanair waxay dul dhigtay sharadkeeda dalab soo celinta iyada oo bilawday wacyigelin weyn oo qorista 2,000 duuliye saddexda sano ee soo socota.
Ryanair waxay la wareegi doontaa 50 ka mid ah dalabkeeda cusub ee 200+ cusub xagaaga 2022.
Iyadoo baahida loo qabo kor u kaca safarka, Ryanair waxay noqon kartaa mid ka mid ah shirkadaha ugu wanaagsan ee diyaaradeed si ay u soo jiitaan baahida.
Ryanair waxay indhaheeda saartay xagaaga xoogan ee 2022. Iyadoo la sugayo soo dejinta diyaarado cusub iyo wada shaqaalaysiin ballaaran, sanadka soo socda waxay umuuqataa inay bixinayso faa iidada shirkada, inkasta oo qaar kamid ah safarka ay la kulmayaan miisaaniyada safarka oo gabaabsi ah.
Duulimaadka ugu qiimaha jaban qaaradda yurub wuxuu hiigsanayaa xagaaga 2022 inay tahay waqtigiisu inuu ifto, diyaargarowguna waa socdaa. Ryanair waxay ku dhejisey sharadkeedii dalab soo celinta iyada oo bilawday hawlgal shaqaale qoris ah oo loogu talagalay 2,000 duuliye saddexda sano ee soo socota. Intaa waxaa sii dheer, Ryanair waxay qaadan doontaa bixinta 50 ka mid ah dalabkeeda cusub ee 200 + marka la gaaro xagaaga 2022, iyadoo isu diyaarinaysa xilligeedii ugu mashquulka badnaa ee ka dambeeyay COVID ilaa maanta. Iyadoo baahida loo qabo kor u kaca safarka ay sii kordheyso iyadoo xayiraadaha ay bilaabeen inay ka fududaan Yurub oo dhan, Ryanair wuxuu noqon karaa mid ka mid ah shirkadaha ugu wanaagsan ee diyaaradeed si ay u soo jiitaan baahida, tanina waxay midho u keeni kartaa xambaaraha, gaar ahaan diyaaradeeda cusub.
cusub ee Boeing 737-8200 dayuurad ayaa bixin doonta sideed kursi oo dheeri ah marka la barbardhigo diyaarada fadhigeedu yahay 189 ee hada, iyadoo yareyneysa gubashada shidaalka 16% halkii kursi iyo yareynta qiiqa / qiiqa CO2, taas oo ka caawin doonta hoos u dhigida qarashka.
Diyaarada cusub ee ciyaarta isbedeleysa ee Ryanair ayaa umuuqata mid sii wadi doonta saldhigii awalba qiimaha jabanaa xitaa ka hooseeya. Hoos u dhaca gubashada shidaalka halkii kursi wuxuu yareynayaa qarashka ku baxa shidaalka, sidaas darteed waxay shirkadda siineysaa shirkad qiimo jaban. Haddii loo gudbiyo rakaabka, Ryanair wuxuu kujiraa boos adag si loo yareeyo qiimaha tikidhada, uu noqdo mid tartan badan, oo cagta cagta u saara ciyaartoyga kale. Diyaaradda cusub ee Ryanair, oo ay weheliso heerar sare oo la filayo baahida loo qabo kor u qaadista, waxay u badan tahay inay arki doonto side sida ugu fiican ee jawiga ka dambeeya COVID, taasoo soo jiidanaysa safarro badan oo miisaaniyadda miyir qaba oo laga yaabo inay ku sheegeen daacadnimadooda meelo kale ka hor cudurka.
Ra'yi ururin dhowaan la sameeyay ayaa muujisay saameynta aafadu ku yeelatay miisaaniyadayaasha socdaalka iyadoo 11% jawaabeyaasha ay sheegeen hoos u dhaca miisaaniyada safarka kadib COVID.
Lacagta la dhimay, safrayaasha horey u doortay shirkadaha xambaara adeegga buuxa waxay u badan tahay inay u wareegaan xambaarayaasha qiimaha jaban ee kumeelgaarka ah. Ryanair waxay noqon doontaa mid sifiican ujirta marka la barbardhigo kuwa kale, gaar ahaan marka labixiyo soo bandhigida diyaaradeeda cusub iyo kaydka kharashka ee ay u gudbin karto si loo kiciyo baahida.
Intaas waxaa sii dheer, ra'yi ururin kale ayaa shaaca ka qaaday qiimaha ugu muhiimsan marka la dooranayo astaanta diyaaradaha. In kabadan nus (52%) jawaab bixiyaasha ayaa xushay sicirka / qiimaha sida ugu weyn - taas oo sifiican ugu dhibto Ryanair.
Mawqifka tartanka shirkadda, qiimaha jaban, iyo shabakadda Yurub ee ballaadhan ayaa bixin doonta macaashka waxayna u arki kartaa shirkadda duulimaadka xulashada safarka kadib-COVID. Bixinta lacagta aad u baahan tahay moodeelka, Ryanair wuxuu soo jiidan doonaa kuwa raadinaya adeegga aasaasiga ah. Waxay si weyn u ruxin kartaa ciyaartoyda hadda jirta, iyo qaabkeeda foosha xun ayaa u arki doonta inay guuleysato safrayaasha si ay uga caawiso inay si xoog leh uga soo baxdo aafada.